Umthandazo wemali Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ukuba utyhubela imeko yezoqoqosho embi kwaye uziva ngathi uwedwa, zama i Umthandazo wemali, Apha ungafunda yonke into oyifunayo.
1 Umthandazo wemali nokubaluleka kwayo
2 Ukuthandazela imali
2.1 Ingelosi enkulu u-Uriel: umthandazo wokuchuma
2.2 Ingelosi enkulu u-Uriel: umthandazo wemali
Umthandazo wemali nokubaluleka kwayo
Ukudalwa kwemali kwakuthetha utshintsho kwihlabathi liphela kwindawo yorhwebo, iimveliso, iinkonzo kunye nokunethezeka kwaphawula ixabiso eliza kuhlawulwa ngemali yalapho zifunyenwe khona.
Ukuba kuyinyani ukuba imali ayisiyiyo yonke into ekuyo el mundoKodwa okwangoku kubaluleke kakhulu. Oku kubonakala mihla le, ukubeka isonka etafileni kuthetha ukusebenzela ukufumana imali nokuthenga isonka, ukuhlawula amatyala omnxeba, umbane, amanzi kunye nazo zonke iinkonzo zeli hlabathi langoku eziyimfuneko.
Kukwakho amaxesha ebomini xa sihamba nexesha elibi emsebenzini, apho kungekho mthombo wengeniso esisigxina yokuphila kwaye kwelo themba liphezulu siqaphela ukuba sifuna uncedo. Kukho abantu ababhenela ekuthandazeleni yonke into ukuba iphucuke, kuyinto eqhelekileyo ukuba iqumrhu elingcwele elikhankanyiweyo ukunceda kule micimbi yiNgelosi enkulu u-Uriel, kwinto eyaziwa ngokuba nguMthandazo wemali.
U-Uriyeli yenye yeengelosi ezisixhenxe ezinkulu, ithathwa njengesimboli sobulumko, inyaniso kunye nombono ocacileyo. Kukho imithandazo yempumelelo ebhekiswa kuye. Ibizwa ngokuba yingelosi yobulumko, ukuchuma kunye nobutyebi. Igama lawo lithetha umlilo ovela kuThixo, lo mlilo ufuzisela inkanuko yokholo etshayo ngaphandle kwamaxesha anzima.
Umthandazo kwi-Archangel Uriel awufanekiseli ukuba imali izokuwa ezulwini, kodwa kungenelelo lwengelosi enkulu ukusikhokela kwindlela yobulumko ukuze sifezekise intabalala yezoqoqosho esinqwenelayo. Kuyimfuneko ukuqonda ukuba ukuphindaphinda umthandazo kuluncedo, kodwa ayisiyiyo yonke into ekufuneka yenziwe, kuxhomekeke kuthi kunye nomnqweno wethu wokuziphucula ukuze sifumane kwaye siphumeze oko sikufunayo kunye nenkxaso yasezulwini ebonelelweyo. kuthi.
UThixo uyazi ukuba siyitempile yakhe, into ayimeleyo kwaye sidlulisa umyalezo wakhe. Uhlala esikhokela ekuphumezeni izinto ezingcono kwaye asisikelele ngengubo yakhe enamandla, uyaqonda ukuba impumelelo sisipho kwaye kufanelekile kwabo basebenza ngokungadinwa, inceba yakhe kuthi inkulu kwaye yiyo loo nto esivumela ukuba siqhubeke nokuphefumla emva komhla usuku. Ucacisa indlela esiza kuqhubeka siyakha kwaye ukuthanda kwakhe kunye nokwethu kuya kusenza sifanelwe kokona kulungileyo ebomini. Unokuba nomdla Umthandazo kuSanta Helena.
Kukho ezahlukeneyo ukuthandazela imaliZonke ezi zinto kufuneka zenziwe ngothando, ukholo kunye nethemba lokuba amaxesha amabi ezoqoqosho esihamba kuwo sele eza kuphela kungekudala.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukwenza umthandazo kufuneka ubekwindawo ezolileyo ekhuthaza ukhuseleko kunye nokwenza izinto elubala. Ngena kwindawo entle kwaye ukholelwe onke amazwi athethiweyo. Nalu uluhlu lwe oisabelo semali oko kunokukunceda ufumane ubulumko bokufumana impumelelo yezoqoqosho:
Ingelosi enkulu u-Uriel: umthandazo wokuchuma
Ingelosi eyintloko nothandekayo u-Uriel, ndibeke intliziyo yam kwaye ndacinga kwinkonzo yokulunga kwakho kunye nolwazi lukaThixo ukuze izenzo zam zindikhokelele kwimpumelelo.
UThixo, ngawe, uhamba nam. Khanyisa iindlela zam. Indinika isibindi kunye nokuzimisela ukufezekisa iinjongo zam. Ndinaye kwaye ndikunye nawe, ndikhuselwe ngomlilo ongcwele.
Bonke abantwana bakaThixo, okoko nje sikholelwa kuye, siya kuba noxolo nobutyebi. Musa ukuvumela ukholo lwam lusilele kwaye nothando lwam ngoThixo lungaphantsi kothando lwakhe kum.
Ingelosi eyintloko nothandekayo u-Uriyeli: ukuchuma ondinike kona kuyenza iflegi yam ukukuqonda phambi kwehlabathi. Ndenze ndiphumelele kwaye ndiza kulibeka elizwini lam igama lakho lokuhlala ndikudumisa.
Thixo Somandla, yamkela umbulelo wam infinito ngobubele ondinike bona ngamaxesha apho bendidinga khona kakhulu. Ukubulela okungapheliyo kunye nothando oluguqulele kubuninzi, undinike lona ukulungela usapho lwam kunye nabahlobo.
Njengomkhonzi wakho, ndizamile ukwenza ukuba izenzo zam zihloniphe umoya ohamba nam ngawe. Umoya wobuninzi ufikile ekhayeni lam kwaye ugqiba iintliziyo zabantwana bam ngengubo engcwele.
Thixo ozukileyo wookhokho bam, khokela izigqibo zam kwaye ufumane ubulumko bakho obungapheliyo kwiinjongo zam, iiprojekthi kunye neenjongo zam. Ukuba ndinawe, ngubani na ongachasene nam? Ndikhusele njengesidalwa sakho endiza kwazi ukukhusela umfanekiso wakho phambi kwamehlo am.
Ingelosi enkulu u-Uriel: umthandazo wemali
Ingelosi eyingelosi enamandla, yamkela kumphefumlo wam lonke umbulelo wam. Ndizalise ngobulumko bakho kwaye undinike ukukhanya kwamandla akho ukufezekisa ubuninzi kunye nokuchuma okufanele usapho lwam.
Khokela amanyathelo am kunye nezigqibo zam, ndibonise indlela ekhanyiselweyo yobuninzi. Ungandivumeli ukuba ndiphelelwe ngamandla okanye ubunzima bokugoba ukuthanda kwam kunye nomnqweno.
Ingelosi eyingelosi enamandla u-Uriel, ngexesha lobumnyama nokungazi, ndivumele ukuba ndibambe isabile sikaThixo kwaye ndimzukise ngemisebenzi yam elungileyo nothando ngommelwane.
Ndingumfanekiso nomfanekiselo kaThixo, omnye wabantwana bakhe abathandayo. Senze ukuba sibe nomthendeleko osisigxina kwaye imali ilawulwa ngobulumko nothando.
Akukubi ukufuna imali kuba ngoku ufuna umvuzo ozinzileyo ukuhlawula iindleko ezibalulekileyo ezinje ngokutya, iinkonzo ezisisiseko kunye nokunye. Kubi ukubawa nokwenza izinto ezingafanelekanga ukuze ufumane imali okanye intabalala, umntu osebenzayo uya kuhlala enelungelo lokufumana umvuzo.
Izulu liyamvuza umntu osebenzela ukuziphilisa kwaye akadingi ukonakalisa imeko-bume yakhe, kunokuba azise uthando kuye kwaye ngumzekelo wokoyisa. Kuya kuhlala kukho iimeko ezinzima apho sinamandla kunye nomsebenzi wokuphumelela kuba uThixo ufuna njalo.
Singamagorha athunyelwe ehlabathini ukuphucula nokuzilungisa ngokwethu de sifumane ulungelelwaniso lweemvakalelo, uthando kunye noxolo ukuze kamva sonwabele ukuphumla okungunaphakade.